FISH: Bamba kwaye ulinganise ukuzibandakanya kwabasebenzisi kumsitho wakho olandelayo | Martech Zone
I-FISH ixhasa iimveliso, abaququzeleli bemisitho, kunye neeligi zemidlalo, ngenkqubo yokusebenza yomsitho eyenza ukuqokelelwa kwedatha yabathengi, ukuququzelela ukubandakanyeka kwabalandeli kwimidlalo yohlobo, kwaye inike abalandeli amandla okuqokelela umxholo, ukungena kwi-sweepstakes, kunye nokwabelana ngamava kumajelo eendaba ezentlalo.
Nokuba kuthathwa ukuqokelelwa kwedatha kwiminyhadala yemarike, ukulinganisa isimilo sokuzimasa kwiminyhadala yecandelo okanye ukubeka esweni ukubandakanyeka kwabathengi kwinkomfa, FISH inokulinganisa konke ukuziphatha kweendwendwe. Idashboard yokunika ingxelo ye-FISH ibonelela ngokufikelela kwangoko kwiimetrikhi ezibalulekileyo, kubandakanya ukubhaliswa kokungena, ukubandakanyeka kwempahla, amaxesha emgceni, ukhuphelo lweselfowuni, ii-SME Engagements, kunye nokunye.
Iqonga le-FISH ngokuyintloko liNkqubo yokuSebenza yoMnyhadala oXhobisa abaququzeleli bemisitho ukuba baqokelele idatha yabathengi, ngelixa kwangaxeshanye bedala imeko engenabungozi kubalandeli ukuba babandakanyeke ngokulula kusebenze uphawu lwentengiso, ukuqokelela umxholo, ukungena kwi-sweepstakes, kunye nokwabelana ngamava kumajelo eendaba ezentlalo. UMichael Gilvar, u-CEO kwi-FISH.
FISH Iminikelo ibandakanya
Umlinganiso weDashboard - Ukubeka iliso kunye nengxelo ngomsebenzi womsitho. Abaphathi bemisitho kunye nabenzi bezigqibo banokufikelela kwangoko kwiimethrikhi ezibalulekileyo, kubandakanya ukubhaliswa, ukubandakanyeka kweeasethi, amaxesha emigca, ukhuphelo lweselfowuni, nokunye okuninzi.
RFID Solutions -I-FISH inyusa zonke iintlobo ze-RFID, kubandakanya i-HF, i-UHF, i-NFC kunye ne-UWB. Basebenzisa i-RFID ukulungiselela ukutshintsha kwexabiso phakathi kwabathengi kunye neempawu-ezivumela abathengi ukuba baqokelele ngokulula umxholo, babelane ngamava kumajelo asekuhlaleni, kwaye bafumane ukufikelela okugunyazisiweyo- ngelixa bevumela uphawu ukuba lubeke esweni indlela yokuziphatha yabathengi kunye nokuhambisa imiyalezo ebekiweyo ngexesha lokwenyani.
Ubhaliso lweSelfowuni -Iqonga lokubhalisa umsitho apho abalandeli banokubhalisa kwaye badlule ngokupheleleyo kubhaliso lwendawo. Xa fan ibhalisile, abayi kucelwa ukuba baqokelele isiteyitimenti, kodwa endaweni yoko baya kuba nakho ukusebenzisa isixhobo esiphathwayo njengesixhobo sokuzibandakanya. Abalandeli baya kwabelana ngeenkcukacha zabo zonxibelelwano ngefom yewebhu ephathekayo, emva koko baboniswe ngeendlela zokusebenzisa i-eVoucher yabo ephathekayo (nokuba ingene kwisicelo, okanye ihanjiswe ngeSMS). Inkqubo yabo itekhnoloji ye-agnostic-evumela isixhobo ukuba sisebenzise nayiphi na itekhnoloji ekhoyo kubandakanya iBLE, QR, okanye iNFC.
Iinkqubo zoLawulo lweeNkokeli -I-FISH ibonelela ngaphambi komnyhadala, kwisiza, kunye neenkqubo zobhaliso ezihambayo ezivumela iimveliso ukuba ziqokelele ngokufanelekileyo idatha yeendwendwe, zinciphise imigca, kwaye zenze ukutshintsha okucacileyo kwexabiso phakathi kweendwendwe kunye neempawu. Onke amaqonga edatha ahlanganiswe ngokungenamthungo kunye ne-CRM yokuphela kunye neenkqubo zokunika ingxelo.
Izixhobo zoonozakuzaku beBrand Abasebenzi be-Onsite abane-RFID Funda / Bhala iitafile ze-Brand Ambassador okanye izixhobo eziphathwayo zivumela ii-brand ukuba zibhalise iindwendwe, zihambise umxholo, zifake iifoto kunye neevidiyo, zenze iiposti zemidiya yoluntu, kwaye zityhale iifoto ezinophawu kwiMithombo yeendaba yeNtlalo- naphina nangaliphi na ixesha.
Iinkqubo zoLawulo lokuFikelela Ukuhambisa ii-wristbands, iiVIP zokuFikelela iziQinisekiso kunye nezinye izixhobo, I-FISH ibonelela ngeenkqubo zokulawula ukufikelela ngokufanelekileyo ukulawula ukufikelela kweendwendwe kuzo zonke iintlobo zeminyhadala kunye neendawo, kubandakanya iMicimbi yeMarquee, imicimbi yesisa kunye neminyhadala. Inkqubo yabo ibonelela ngengxelo yexesha-lokwenyani, ibonelela ngohlalutyo olunokwenzeka lwento yonke eyenziweyo, kunye nolwazelelo lwedatha oluqinisekisiweyo kwishishini.
Isisombululo seFoto yokuThengisa -I-FISH ibonelela ngezisombululo zokuthengisa iifoto ezenza ukuba iimveliso zithathe iifoto zeendwendwe zazo ezinemvelaphi enophawu lwentengiso kwaye ziyithumele kuFacebook, kwi-Instragram, kuTwitter, kwiindawo zeMicro, okanye kwi-imeyile ngexesha lokwenyani.
Ukudityaniswa kweMithombo yeendaba -Iindwendwe zifumana oomatshini abasebenzisanayo, njengeebhanti zewrist, iiVIP Passes, iifobs eziphambili, okanye iiVoucher eziSelfowuni njengoko bengena kumava ebrendi. Iindwendwe zibhalisa oomatshini bazo kwaye zinxulumana neakhawunti yabo yemidiya yoluntu. Iindwendwe ke zibandakanya itekhnoloji ezenzekelayo okanye oonozakuzaku bekhompyuter kunye neethebhulethi zePC ezibajonga ukuba basebenze ukulungiselela azithandayo, kwaye uthumele iifoto kunye neevidiyo kwiiakhawunti zabo zemidiya yoluntu ngexesha lokwenyani.
Uhlalutyo -Ixesha lokwenyani, idatha enokulinganiswa enokuchazwa xa kuthathwa izigqibo, uhlalutyo lobuchule kunye ne-ROI eqinisekisiweyo. I-FISH ayiqokeleli kuphela idatha yobhaliso, kodwa idatha ebonelela ngemeko kwaye ixhobisa ukwenziwa kwezigqibo okungcono. Igalelo ledatha (elihlala libizwa ngokuba yi "meta data") njengobungakanani benyawo, imozulu, ukunyuselwa, inani labasebenzi, njl njl. Liyaqokelelwa kwaye lihlalutywe ukunceda abathengi babo bangaqondi kuphela iziphumo, kodwa baqonde nokuba yeyiphi imiba yamava anegalelo ekuqhubeni ezo iziphumo.
Inqaba yomkhondo we-FISH sisisombululo esikhethekileyo esikwaziyo ukuqokelela idatha ngethegi yeRFID. Nantsi imbonakalo yevidiyo:
I FISH isandula ukusebenzisana nabaxhasi bethu e Iposi, Ukwenza isisombululo sokuqala sohlobo lwaso samava fan kunye namava ophawu lweziganeko, ii-arena kunye neevenkile zentengiso. Umdibaniso wenza ukuba iimveliso ziphucule ngokumangalisayo amava omnyhadala wabalandeli ngokudibanisa ngaphandle komthungo ubhaliso, i-badging, ukwabelana ngokwasentlalweni, kunye nokubonwa kwentlalo.
Iqonga le-FISH ligunyazisa uninzi lwehlabathi olwamkelekileyo uphawu kunye neziganeko, kubandakanya i-US Army, i-US Air Force, i-Hyundai, i-Samsung, i-NFL, i-NBA kunye ne-Major League Soccer.
tags: iinkqubo zolawulo lofikeleloizixhobo zommeli wentsimbiinkomfa analyticsimicimbi yequmrhuisiganekoUhlalutyo lomsithoulawulo lomnyhadalaulawulo lomsithoIdeshibhodi yolawulo lomsithoIFISHhyundaiulawulo oluphambiliMajor League SoccerINkomfa yeNtengisoubhaliso lweselfowuniNbanflizisombululo zentengiso yezithombeiinkqubo zentengiso yezithombeipostirfid izisombululoUkumakishwa kwe-rfidSamsungukudityaniswa kweendaba zosasazoUmkhosi Womoya wase-USArmy yaseMelikaUkuziphatha kweendwendwe
Ukunyusa uyilo lwe-imeyile ukuze ubambe ingqalelo yoMfundi wakho